Basaska Dawlada Hoose ee Kocaeli ayaa Daboolmay 2 Milyan oo Kiiloo Mitir bishii | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliGawaarida Magaalada ee Kocaeli ayaa daboolay 2 Milyan oo Kiilo Mitir bishii
15 / 05 / 2020 41 Kocaeli, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Basaska magaalada ayaa safray hal milyan oo kilomitir bishii
Gaadiidka Magaalada Kocaeli ee Magaalada Kocaeli wuxuu siiyaa raaxo, nadaafad iyo waqti gaadiid adeeg oo kumanaan rakaab ah maalin walba basaska. Basaska Dawladda Hoose ee Magaaladu waxay bixisay adeeg gaadiid oo aan kala go 'lahayn iyagoo safraya 1 milyan oo kilomitir bishiiba intii lagu jiray la dagaallanka coronavirus.
72 GUDOOMIYAHA BASKA
Basaska Dawlada Hoose waxay sii wadaan duulimaadyadooda si isdaba joog ah. Waxaa jira 247 kun 2 safar maalin kasta oo leh 570 bas, 16 kun 938 usbuucii, iyo 72 kun 892 duulimaad bishiiba. Basasku waxay u adeegi jireen muwaadiniinta mudadii uu socday cudurka faafa, iyagoo sameeyay 1 milyan oo km bishii isla markaana kama tegin halka keliya ee Kocaeli aan la booqan. Basaska degmada, oo siiya adeegyo gaadiid raaxo leh muwaadiniinta, ayaa sii wada muwaadiniinta isticmaalkooda.
XUQUUQDA BASAHA OO KU SAMEEYSA ADEEGGA LAGU JOOJIYO
TransportationPark waxay sii waday adeegyadeedii, oo ay kujirto bandow lagu soo rogay nidaamka faafa cudurka socda. Gawaarida raaxada leh, basaska ay u qaadaan masuuliyiin badan, gaar ahaan xirfadleyda daryeelka caafimaadka, meeshii ay aadeen, ayaa sidoo kale u suurtagashay inay calaamado buuxa ka helaan muwaadiniinta.
GaadiidkaPark waxay jabayaan dhamaan basaska bixiya adeega inta lagu gudajiro maalinta iyagoo shaqeynaya ilaa iyo habeenkii waqtiga habeenkii. Nadiifinta, oo bilaabmaysa qiyaastii 23.00, waxay socotaa ilaa 6 subaxnimo. Dhibco kasta laga bilaabo to to z maalin kasta waa la jeermis diraa: gudaha, dibedda, daaqadaha, qolka darawalka, qabashada, gacanta kursi rakaab, sagxadyada, saqafka, saqafka kore iyo nadiifinta geeska hoose.
Marmaray 1 ayaa qarisay munaasabadan 1,4 malyan sannadkii
Gaadiidka gaadiidka 2 ayaa sanadkan u socdaalay
Duqa Magaalada Sahin: "Waxaan Leenahay Wadada 4 Miyiga ee 400 Bishii"
Adana metro iyo basaska magaalada waxaa isticmaala ardayda
Gaadiidka cusub ee magaalada ayaa yimid Antalya